Egyptian bride ordered to pay £5,000 compensation to groom because she had secret surgery to restore her virginity
သူမို့ လှည့် စားရက်တယ်...
မိမိကိုယ်မိမိအပျိူစင်တစ်ယောက်ဖြစ်သည်ဟု လက်ထပ်ခဲ့သည့် ခင်ပွန်းအား လိမ်လည်လှည့် ဖြားခဲ့ သည့်
အီဂျစ်နိုင်ငံသူအမျိူးသမီးတစ်ဦးအား လျော်ကြေးငွေ ပေါင်စတာလင် ၅၂၄၀ ( ဒေါ်လာ ၈ ထောင်ခန့် ) ခင်
ပွန်းဖြစ်သူကိုပေးဆောင်ရန် အမိန့် ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်...
အမျိူးသားဖြစ်သူက ၎င်း၏ဇနီးသည်အနေဖြင့် ယခင်ကတစ်ကြိမ်တစ်ခါမျှလက်မထပ်ခဲ့ ဖူးတာမို့ အပျိူစင်
တစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ ကြောင်းဖြင့် လိမ်လည်လှည့် ဖြားခဲ့ ကာ ထိုသို့သူမအားအပျိူစင်အဖြစ်ထင်ယောင်ထင်
ထင်မှားဖြစ်စေရန်ခွဲစိတ်ပြုပြင်အလှဆင်ခဲ့ ကြောင်းဖြင့် ယူအေအီးနိုင်ငံ၊ မြို့ တော်အဘူဒါဘီတရားရုံး အယူ
ခံခုံရုံးအထိရောက်ခဲ့ သည့် ခါးသီးနာကြည်းဖွယ်ရာ ကွာရှင်းပြတ်စဲကြောင်းတရားရင်ဆိုင်မှုတွင် စွပ်စွဲဖေါ်
ထိုအမျိူးသမီးအနေဖြင့် သူမ၏ခင်ပွန်းအားလိမ်လည်လှည့် ဖြားခဲ့ ကြောင်းဆုံးဖြတ်ခဲ့ သည့် ယခင်တရားရုံး
၏အမိန့် အားဆက်လက်အတည်ပြုလိုက်ပြီး ခင်ပွန်းဖြစ်သူအနေဖြင့် စိတ်ထိခိုက်နာကျင်ခံစားရသည့် အ တွက် နစ်နာကြေးကိုလည်း ပိုမိုရသင့်ကြောင်း တိုးမြှင့် သတ်မှတ်ပေးခဲ့ ပါတယ်...
အတုအပသတိပြု.... နစ်နာကြေး ပေါင်စတာလင် ၅၀၀၀
Accused: An Egyptian bride has been ordered to pay more than £5,000 compensation to her husband after he accused her of lying about beingavirgin before they married (file picture)
ထိုလျော်ကြေးငွေကတော့ အာရပ်ကမ္ဘာရဲ့ ဓလေ့ထုံးစံအရ အလိမ်အညာမိသွားလို့ အရှက်တကွဲအကျိူး
နည်းဖြစ်ရတဲ့ သတို့ သားနှင့် မိသားစုဝင်တွေအတွက်ဖြေသိမ့် စရာအဖြစ် ရည်ရွယ်ပါတယ်...
အဆိုပါအမှုဟာ မူရင်လက်ထပ်စာချူပ်တွင် တစ်ချိူ့ သောအချက်အလက်များအား သတို့ သမီးဖြစ်သူမှ
မမှန်မကန်ထည့်သွင်းဖေါ်ပြခဲ့ သည့်ကိစ္စရပ်များနှင့် ပါတ်သက်ပြီးအခြေတည်ကာဖြစ်ပွားခဲ့ တာဖြစ်ပါတယေ်...
အမျိူးသမီးအနေဖြင့် ယခင်တစ်ကြိမ်က လက်ထပ်ခဲ့ ပြီးထိုစဉ်ကခင်ပွန်းဖြစ်သူနှင့် ကွာရှင်းပြတ်စဲခဲ့ တယ်
လို့ တရားရုံးကဆုံးဖြတ်ခဲ့ ပါတယ်...
သူမအနေဖြင့် ဖခင်ဖြစ်သူ၏အကူအညီဖြင့် လက်ထပ်စာချူပ်တွင် ယခင်ကလက်ထပ်ခဲ့ ဖူးခြင်းမရှိ၊ တစ်
ခြားယောကျာင်္းတစ်ဦးဖြင့် အိပ်စက်ပျော်ပါးခြင်းမရှိခဲ့ ကြောင်း လိမ်လည်ဖော်ပြခဲ့ တယ်လို့ သတင်းဌာန
ခင်ပွန်းဖြစ်သူထံသို့ အငြိုးဖြင့် ပေးပို့ လိုက်သော တယ်လီဖုံးမက်ဆေ့ ခ်ျများကြောင့် ၎င်းတို့ ဇနီးမောင်နှံ၏
လက်ထပ်ပြီး ၃ နှစ်ကြာပြီးနောက် ကလေးတစ်ယောက်ရအပြီးတွင် လက်ရှိခင်ပွန်းထံသို့ အမည်မသိသူထံ
မှ ၎င်း၏ဇနီးဖြစ်သူမှ ယခင်ကလက်ထပ်ခဲ့ ဖူးကြောင်းဖော်ပြသည့် ဖုံးမက်ဆေ့ ခ်ျ ရောက်ရှိလာခဲ့ တာဖြစ်
အာရပ်လူမှုအသိုင်းအ၀န်းမှာတော့ ကွာရှင်းပြတ်စဲခြင်းဟာ ဂုဏ်သိက္ခာညိုးနွမ်း၊ အရှက်ရစေတယ်
လို့ ( အထူးသဖြင့်အမျိူးသမီးများအနေဖြင့် ) မှတ်ယူထားကြပါတယ်....
Tradition: Divorce is still frowned upon by some parts of Arab society and is seen as an embarrassment for those involved and their families
အဆိုဖုံးမက်ဆေ့ ခ်ျ ပို့ ပြီးနောက် ခင်ပွန်းဖြစ်သူထံသို့ ထိုအမျိူးသမီး၏ယခင်က ခင်ပွန်းဖြစ်သူနှင့် ကွာရှင်း
ကြောင်းအထောက်အထားစာရွက်စာတမ်းအားလည်း ရောက်ရှိခဲ့ တာမို့ ၎င်းအနေဖြင့် အီဂျစ်နိုင်ငံသူဇနီး
သည်အား လိမ်လည်လှည့် ဖြားမှုဖြင့် ကွာရှင်းခွင့် တောင်းစေခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်...
ယခုကဲ့ သို့ ၎င်းအနေဖြင့် လိမ်လည်လှည့် ဖြားခံခဲ့ ရသဖြင့် ပါတ်ဝန်းကျင်အသိုင်းအ၀ိုင်းတွင် ယုံကြည်မှု
ပျက်ပြားခဲ့ ရပြီး စိတ်ဓါတ်ကျဆင်းမှုလည်းဖြစ်ခဲ့ရတာမို့ စိတ်နာကြင်ခံစားမှုအတွက် နစ်နာကြေးရထိုက်
၎င်း၏ဇနီးသည်ဟာ သူမကိုယ်သူမ အပျိူစင်တစ်ယောက်ကဲ့ သို့ ထင်မှတ်စေရန် အာရပ်နိုင်ငံအချိူ့ တွင်
ခေတ်စားနေသည့် အမျိူးသမီးများ အပျိူစင်ကဲ့ သို့ ပြန်ဖြစ်စေသည့် ခွဲစိတ်ပြုပြင်မှုမျိူးပြုလုပ်ခဲ့ တာဖြစ် တယ်လို့ ခင်ပွန်းဖြစ်သူက စွပ်စွဲခဲ့ ပါတယ်...
ဒီအမှုကတော့ လွန်ခဲ့သည့် နှစ် ဂျူလိုင်လတွင် ယူအေအီးနိုင်ငံ၊ ဒူဘိုင်းမြို့ တွင်တရားရုံးတော်တစ်ခုမှ ခင်
ပွန်းဖြစ်သူအား အင်တာနက်မှ မဖွယ်မရာ၊ညစ်ညစ်ရုပ်ပုံ၊ ဗီဒီယိုများအား အလွန်အမင်း၊ အရူးအမူးစွဲလမ်း
နေကြောင်းဆုံးဖြတ်ကာ ကွာရှင်းပြတ်စဲပြီး အမျိူးသမီးအားနစ်နာကြေး ပေါင်စတာလင် ၁၆၀၀၀ ရရှိစေခဲ့ 
သည့် အံ့သြထူးဆန်းဖွယ် ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့် ဆန့် ကျင်ဖက်ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်....
ယခုဖြစ်ပွားခဲ့ သည့်ဇနီးမောင်နှံ၏ အိမ်ထောင်ရေးကတော့ စကတည်းကယဉ်သကိုဆိုသလို ပျားရည်ဆန်း
ခရီးထွက်ကတည်းကပင် ခင်ပွန်းဖြစ်သူမှ ၎င်းတွင်လိင်မှတစ်ဆင့် ကူးစက်တတ်သည့်ရောဂါဖြစ်နေခဲ့ ပြီး ယနေ့ ထိတိုင်ကုသနေရဆဲဖြစ်သည်ဟုဝန်ခံပြောဆိုခဲ့ သည်ဟုလည်း တရားရုံတွင်ထွက်ဆိုခဲ့ ကြသည်ဟု ဆိုပါတယ်....
An Egyptian woman has been ordered to pay her former husband £5240 in compensation after he discovered she had lied to him about her virginity.
The man acစused his wife of deceiving him into believing she had never been married before - and thereforeavirgin - and of having surgery to fake her virginity, duringabitter divorce battle which went to the court of appeal in Abu Dhabi.
The court upheldaprevious ruling that found she had deceived her husband and increased the compensation she must now pay for the emotional damage she caused him.The money is also meant to help him overcome the stigma of what is considered in some parts of Arab society to be an embarrassing ordeal for him and his family.
The case centred around the original marriage contract made by the couple where the Egyptian bride, the court heard, allegedly fakedanumber of key points about her background.
The court established the woman had been married earlier and had divorced her first husband. It also acknowledged that she had made false statements 'with the help of her father, in the couple’s marriage contract - stating that she had never been married or had sex,' according to press reports.
The demise of the couple’s marriage came about followingaspiteful sms message sent to the current husband, the court heard. Court records show that after three years of marriage, and the birth ofachild, her current husband received an anonymous text message informing him that his wife had been married in the past.
The text message was later followed up byacopy of the woman’s divorce document which was also sent to the husband as proof, prompting the man to file for divorce against his Egyptian wife for lying to him.
He claimed compensation from her for the emotional damage he suffered, claiming that he was 'suffering from depression and had lost trust in the people around him asaresult of her deception.'
The husband also accused his wife of undergoing surgery to make it seem as though she wasavirgin –asimple operation which is becoming increasingly common in some Arab countries.
This is far from the first bizarre divorce case in the United Arab Emirates. In July of last yearaDubai court reportedly awarded an Emirati woman about £16,000 inashocking divorce settlement, after she claimed her husband was 'obsessed' with internet pornography.
It was also heard in court that their wedding was doomed from the beginning when the bridegroom allegedly admitted on their honeymoon to having sexually transmitted diseases which were currently being medically treated.
Posted by peter kyaw | at 7:56 AM |
ဒီလိုသာ ဒဏ်ရိုက်ရမယ် ဆိုရင်ဖြင့် ... :)
Can simply clenchingafist boost memory? Balling ...
Eyeball Scraping – The Vanishing Trade Practiced b...
Nepalese TV presenter sets record for longest-ever...
Three UAE men ejected from Saudi Arabian festival ...
Man rescued after two-tonne bell fell on top of hi...
Egyptian bride ordered to pay £5,000 compensation ...
Happy Myanmar New Year !!!! ချမ်းမြေ့ ပျော်ရွှင်ဖ...
Talk about pigheaded... this one's got two: Piglet...
World's Most Friendliest Countries
မီးသတ်ဆရာတို့ ရဲ့ ဖြစ်မျိူးစုံလင်... အင်တာနက်နဲ့ ...